Apple Watch ma lahaan doono mitir gulukoos ah, ugu yaraan hada | Wararka IPhone
Tan iyo ka hor intaan la soo saarin Apple Watch, wararka xanta ah ee ku saabsan dhammaan dareemayaasha ee ah inay ku darayaan internet-ka ayaa buux dhaafiyay. Dareeraha garaaca garaaca wadnaha ayaa loo qaatay si aan caadi ahayn, laakiin sidoo kale waxaa jiray hadal heynta mitirka garaaca wadnaha (go'aaminta ogsijiinta dhiigga ku jirta), xitaa dareeraha gulukoosta dhiigga in aysan u baahnayn nooc irbad ah.
Ka dib jiilka afaraad ee Apple Watch horeyba suuqa, mid ka mid ah mawduucyada ugu soo noqnoqda marka la eego waxa howlaha caafimaad ee cusub ee ay ku biirin karaan ayaa si sax ah u go'aaminaya gulukoosta dhiigga. Waxaan ka hadleynaa malaayiin dad badan oo adduunka ah oo ka faa'iideysan kara nidaamka cabbiraadda sidan oo kale, laakiin xaqiiqadu waxay tahay inaan wali ka fognahay waxa dhacaya.
1 Go'aanka gulukooska dhiigga ku faafa
2 Go'aaminta gulukooska dhiigga ee aan faafin
3 Tallaabada ugu dambeysa waa FDA, mana ahan kaftan
Go'aanka gulukooska dhiigga ku faafa
Glucose (sidoo kale badanaa loo yaqaan sonkorta) dhiiga waxaa lagu go'aamin karaa dhowr siyaabood. Laga soo bilaabo baadhitaanada dhiigga ee caadiga ah si loo ogaado gulukoosta dhiigga ilaa go'aaminta gulukooska isdhexgalka iyadoo la isticmaalayo balastar yar oo cirbad yar leh inaad gacantaada saarto laba toddobaad, adoo maraya qaabka ugu caansan ee cabbirka, gulukoosta dhiigga ee dhiigga, oo ka kooban farta caadiga ah
Si aanan ugu lug yeelan eraybixinta caafimaad, in kastoo aysan isku mid ahayn go'aammo isku mid ah, waxaan dhammaantood ku soo ururin doonnaa hal magac oo guud: go'aaminta gulukooska ee waxyeellada leh. Duulaan maxaa yeelay waxay isticmaashaa habab duullaan ah si loo heloMuhiim kuma ahan cabirka irbadda, xaqiiqda ayaa ah inaad mudayso si aad u awoodo inaad cabirto. Waqtigan xaadirka ah tani waa farsamada kaliya ee dhabta ah ee sonkorowgu u isticmaali karo inuu ku hubiyo sonkorta dhiigooda.
Go'aaminta gulukooska dhiigga ee aan faafin
Dabcanna ma ahaan doonto maxaa yeelay lacagta laguma maalgelin raadinta hababka go'aaminta aan duulimaadka ahayn. Sidii aan horey u sheegnay, waxaan ka hadleynaa malaayiin badan oo macaamiil macquul u ah shirkadda ku guuleysata, taasna macnaheedu waa lacag badan. Laakiin hadda cidina lama imaan qaab lagu kalsoonaan karo oo ay ansaxisay FDA, jirka xukuma aaladaha caafimaadka ee Mareykanka waana in loo ogolaado qalab kasta oo loo adeegsado ujeedooyin caafimaad.
Waa hagaag, runtii haddii uu jiro qalab ay ansixisay FDA, magaceedu wuxuu ahaa GlucoWatch. Waxay u muuqatay 2001 inay ahayd dhammaadka daloolinta cudurka sonkorowga, laakiin xaqiiqadu waxay tahay inay ahayd guul-darro muuqata oo aan dib dambe loo maqal. Isaga oo adeegsanaya koronto yar, wuxuu awood u yeeshay inuu cabbiro gulukoos, ugu yaraan aragti ahaan. Maanta waligeed ma helin oggolaanshaha FDA maxaa yeelay waxay ku fashilantay inay caddeyso go'aaminta gulukooska ee la isku halleyn karo, oo leh qaylo-dhaan badan oo been ah sababtoo ah heerarka gulukoosta dhiigga oo sarreeya, marka lagu daro inay keento cuncun maqaarka ah oo badan oo ka mid ah adeegsadayaasheeda. Waxay u baahan tahay saddex saacadood si loo bilaabo cabbiraadda, waxayna qaadatay dalool si loo qiyaaso.
Fiasco-kan kadib, waxaa jiray mashaariic badan oo guusha raadiyey, laakiin midna ilaa hada ma gaarin. Kama hadlayno kooxaha cilmi-baarista yar-yar, oo ay sidoo kale jiraan, laakiin waxaan ka hadlaynaa shirkadaha sida Google oo kale ah horeyba 2014 Waxay ku dhawaaqeen inay ku shaqeynayaan muraayadaha indhaha si ay u cabiraan gulukoosta dhiigga. Wax kale lagama oga mashruucaas, sida kuwa kale oo badan. Internetka waxaa hubaal ah inaad ka heli doontid qormooyin badan oo ballan qaadaya xalalka imanaya, laakiin midkoodna kuma dhammaan inuu isu yimaado. Sida K'Watch Glucose, kaas oo bishii Sebtember ee la soo dhaafay ku xidhay ololaheeda ururinta iyada oo guulo la taaban karo laga soo xigtay abuurayaasheeda, iyo boggeeda iyo Twitter-keeda ay aamusnaayeen tan iyo bishii Noofambar 2017.
Tallaabada ugu dambeysa waa FDA, mana ahan kaftan
Aynu ka fikirno in haddii shirkaddu awood u leedahay inay xal u hesho dhibaatadan, Apple wuxuu noqon lahaa musharraxa ugu fiican ee lagu gaari karo. Qadarka lacagta ee lagu maalgeliyay R&D sanadihii la soo dhaafay si fiican ayaa loogu qiil bixin karaa mashaariicda sidan oo kale ah, wax walboo la sheego. Laakiin turunturradii ugu dambaysay ayaa sii jiri doonta, mana yarayn doonto. FDA waa inay siisaa ruqsad qalabkan in caafimaad ahaan loogu isticmaalo, tanina waa inay noqotaa markay noqoto go'aaminta gulukoosta. Kama hadlayno inaan cabirno garaaca wadnaha markaan ornono, ama kalooriyada aan ku bixinno inta lagu jiro maalinta. Waxaan ka hadlaynaa cabirro cawaaqib ku yeelan doona caafimaadka dadka, maxaa yeelay insulin-ta ay durayaan ayaa ku tiirsan iyaga, ama inay tagayaan qolka gargaarka degdegga ah iyo in kale.
Qalab sidan oo kale ah ayay FDA u kala saari doontaa qalab Caafimaad oo Heer III ah sababta oo ah "suurtagalnimada sare ee halista." In kasta oo qalabka Class I iyo II guud ahaan aysan u baahnayn marxalad tijaabo ah kahor intaan la suuq geyn, Fasalka III waa inay qasab ku maraan marxaladan tijaabada ah ka hor inta aan loo bandhigin dadweynaha, sidoo kale waa lagama maarmaan in la daabaco natiijooyinka daraasadaha caafimaadka. Waxaas oo dhan waxaa lagu soo koobay in aan ka hadlayno bilo, waxaan dhihi lahayn xitaa sanado laga bilaabo marka sheygu diyaar yahay ilaa laga iibin karo dadweynaha iyadoo leh shaabadda FDA.
Ka dib fiasco ka dhacay GlucoWatch, oo tixgelinaya sida ay u habboon tahay aaladda Apple sidan oo kale ah, cidna shaki kama qabin in FDA ay si dhow u eegi doonto faahfaahin kasta oo ka mid ah, taasna waxay sidoo kale ka dhigan tahay in mar uun wararka waxay la muuqan doontaa faahfaahin ku saabsan tikniyoolajiyaddan cusub ee dib loo eegayo, wax aan ilaa hadda dhicin. Saacadda Apple ee aan aragno sannadkan, xitaa sannadka dambe, ma lahaan doono mitir gulukoos ah oo aan faafin. Waxaan jeclaan lahaa inaan liqo mid kasta oo ku dhowaad kun eray oo qoran, waxba igama gelin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Apple Watch malahan mitirka gulukooska, ugu yaraan hada
Eebbe dartiis u sax qodobka labaad "appel watch"
Isbarbardhiga nolosha batteriga ee iOS 11.3 vs iOS 11.2.6 ee fiidiyowga